စာတန် - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင်၏ဆွစ်ဇာလန်ဘုရားကျောင်း
ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ power ၀ ံဂေလိတရား
အသစ်သောဖန်တီးမှု၏ DNA ကို
ယေရှု - အသက်မုန့်
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် - ထိုမမြင်နိုင်သောမြင်လျှင်
ယရှေုသညျ Bundeli သို့ပွညျ့စုံ
ယရှေုသညျ - လူတစ်ဦးအတွက်ပညာကို
တကယ့် Vollbracht Is
ယရှေုသညျ - ထိုမြတ်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်း
အေးဆေးနေပါ - ဂေါ်ဒွန်အစိမ်းရောင်
မဿဲ 9: ကုသမှု၏ရည်ရွယ်ချက်
မဿဲ 7: အတောငျပျေါဒသေနာ
မဿဲ 6: အတောငျပျေါဒသေနာ
ရှောလမုန်မင်းကြီးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 22 ၏မိုင်းများ
မဿဲ 5: အတောငျပျေါဒသေနာ
ဆာလံကျမ်း - ဘုရားသခင့ကြားဆက်ဆံရေး
ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 21) ၏မိုင်းများ
အဆိုပါ Bergpredigt (အပိုင်း 1)
ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 20) ၏မိုင်းများ
ဆုံးရှုံးမှု။ , ,
ဆုံးဖြတ်ချက် - ဘုရားသခင့ကြည့်ရှုရန်
ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 19) ၏မိုင်းများ
ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 18) ၏မိုင်းများ
ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 17) ၏မိုင်းများ
ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 16) ၏မိုင်းများ
ဘုရားသခင့ GPS စနစ်
ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 15) ၏မိုင်းများ
အဘယ်အရာကိုဒေါက်တာ Faustus မသိခဲ့ပါ
ငါ 100% Venda ဘူး
ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 14) ၏မိုင်းများ
ဆာလံ9နှင့် 10
ရှောလမုန်မင်းကြီး (အပိုင်း 13) ၏မိုင်းများ
အဆိုပါကူကယ်ရာမဲ့၏ဆာလံ 8 သခင်ဘုရား
ဘုရားသခငျသညျ - တစ်ဦးမိတ်ဆက်
ဘုရားသခင်၏အဖြစ်မှန် II ကိုအသိအမှတ်မပြု
အဆိုပါကိုရွေးနှုတ်သော program တစ်ခု
ကားလ် Barth: ပရောဖကျတို့ဘုရားကျောင်း
ဗျာဒိတ် ၁၂ းဘုရားရှိခိုးကျောင်း
မဿဲ 24 အဆုံးနှင့် ပတ်သက်.
ခရစ်ယာန်ကောင်းတစ် ဦး ဆိုတာဘာလဲ
ယေရှု - ဒဏ္Justာရီတစ်ခုပဲ
Xmas - ခရစ္စမတ်
အဆိုပါအေးဂျင့်ကို message သည်
တစ်ဦးက Morphing စာတစ်စောင်
စဉ်းစားပါ - ထိုမမြင်ရတဲ့တွေ့မြင်
ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး - ကဘာလဲ?
Josepf Tkach ၏
ပုရွက်ဆိတ်တွေထက် သာ. ကောင်း၏
WKG ၏ ပြက္ခဒိန်
အဆိုပါ WCG ၏နောက်ခံသမိုင်း
ဒေါက်တာ၏ပုံတူ ယောသပ်သည် Tkach
အဆိုပါ WCG ပြန်ရှာနေ
ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ်
အဆိုပါ Triune ဘုရားသခငျသညျ
က Man [လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်]
ဂျေ Tkach ကနေန်ထမ်းပေးစာ
MB 2020 မတ်လ
MB 2018 ဒီဇင်ဘာလ
MB 2018 နိုဝင်ဘာလ
MB 2018 စက်တင်ဘာလ
MB 2018 ဇန္နဝါရီလ
ကို MB 2017 ဒီဇင်ဘာလ
ကို MB 2017 နိုဝင်ဘာလ
ကို MB 2017 အောက်တိုဘာလ
ကို MB 2017 စက်တင်ဘာလ
ကို MB 2017 သြဂုတ်လ
ကို MB ဇူလိုင်လ 2017
ကို MB ဇွန်လ 2017
ကို MB 2017 မေလ
ကို MB 2017 ဧပြီလ
ကို MB 2017 မတ်လ
ကို MB ဖေဖော်ဝါရီလ 2017
ကို MB 2017 ဇန်နဝါရီ
ကို MB 2016 ဒီဇင်ဘာလ
ကို MB 2016 နိုဝင်ဘာလ
ကို MB 2016 အောက်တိုဘာလ
ကို MB 2016 စက်တင်ဘာလ
ကို MB 2016 သြဂုတ်လ
ကို MB ဇူလိုင်လ 2016
ကို MB ဇွန်လ 2016
ကို MB 2016 မေလ
ကို MB 2016 ဧပြီလ
ကို MB 2016 မတ်လ
ကို MB ဖေဖော်ဝါရီလ 2016
ကို MB 2016 ဇန်နဝါရီ
ကို MB 2015 ဒီဇင်ဘာလ
ကို MB 2015 နိုဝင်ဘာလ
ကို MB 2015 အောက်တိုဘာလ
ကို MB 2015 စက်တင်ဘာလ
ကို MB 2015 သြဂုတ်လ
ကို MB ဇူလိုင်လ 2015
ကို MB ဇွန်လ 2015
ကို MB 2015 မေလ
ကို MB 2015 ဧပြီလ
ကို MB 2015 မတ်လ
ကို MB ဖေဖော်ဝါရီလ 2015
ကို MB 2015 ဇန်နဝါရီ
englisch | အီတလီ | ပြင်သစ်
အခြားဘာသာစကား- ဂျာမန်- ပြင်သစ်- အီတလီ- အင်္ဂလိပ်- စပိန်ဘာသာစကား- ပေါ်တူဂီ- ဒတ်ချ်- လူဇင်ဘတ်စ်- Danish- နော်ဝေ- ဆွီဒင်- ဖင်လန်- ပိုလန်- ဘူဂေးရီးယား- ရုရှား- လက်တင်------------- အာဖရိကန်- အယ်လ်ဘေးနီးယန်း- အမ်ဟာရစ်- အာရဗီ- အာမေနီယန်- အျောဇောဘိုငျဂြောနီ- Basque အဘိဓါန်- ဘင်္ဂါလီ- ဘီလာရုစကား- ဗမာ- ဘော့စျနီးယား- Cebuano- Chichewa- တရုတ်- အက်စ်တိုးနီးယားဘာသာစကား- ဂါလာစီယံ- ဂျြောဂြီယနျ- ဂရိ- Haitian- ဟာဝယေံ- ဟီးဘရူး- ဟိန္ဒူ- အင်ဒိုနီးရှား- အိုငျးရဈ- Icelandic- ဂျပန်- ဂျာဗားနီးစ်- ခါဇက်စတန်- ကာတာလန်- ခမာ- ခရူဂစ်- ကိုရီးယား- Corsican- ခရိုအေရှန်- ကဒ်- လာအို- လတ်ဗီးယား- လစ်သူအာနီယံ- အာလာဂါစီ- မလေးရာလမ်- မလေးရှား- Maltese- Maori- မာရသီ- မာစီဒိုနီယံ- မွန်ဂို- နီပေါ- ပါရှန်- ပါရှန်း- ဖိလဈပီနို- ပနျခြာပီ- ရိုမေးနီးယား- Samoan- စကော့တလန်- ဆားဗီးယန်း- ဆီဆိုသို- စင်ဒီ- ဆငျဟာလ- စလိုဗကျ- စလိုဗေးနီးယန်း- ဆိုမာလီ- ဆူဒန်- ဆွာဟီလီ- တာဂျစ်ကစ္စတန်- တမီးလ်- တီလီဂု- ထိုင်း- ချက်- တူရကီ- ယူကရိနျး- ဟနျဂရေီ- အူဒူ- Uzbek- ဗီယက်နမ်လူမျိုး- ဝလေ- ရိုရုဘာ- ဇူလူ
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး > ယုံကြည်ခြင်းအရာသည် WCG သတ်မှတ် > စာတနျသ
စာတန်သည် ဝိညာဉ်လောကရှိ မကောင်းသော အင်အားစုများ၏ ခေါင်းဆောင်၊ ကြွေကျသွားသော ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ မာရ်နတ်၊ ရန်သူ၊ လူဆိုး၊ လူသတ်သမား၊ လူလိမ်၊ သူခိုး၊ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်သူ၊ ငါတို့၏ညီအစ်ကိုတို့ကို စွပ်စွဲသူ၊ နဂါး၊ ဤလောက၏နတ်ဘုရား၊ သူသည် ဘုရားသခင်ကို အဆက်မပြတ် ပုန်ကန်သည်။ သူ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတစ်ဆင့် လူများကြားတွင် သဘောထားကွဲလွဲမှု၊ မှိုင်းတိုက်မှုနှင့် မနာခံမှုတို့ကို ပေါက်ဖွားစေသည်။ ခရစ်တော်၌ သူသည် ရှုံးနိမ့်ပြီးဖြစ်ပြီး၊ ဤလောက၏ဘုရားအဖြစ် သူ၏အုပ်စိုးမှုနှင့် ဩဇာအာဏာသည် ယေရှုခရစ်၏ပြန်လာခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ်မည်ဖြစ်သည်။ (လု 10,18; ဗျာဒိတ် ၂2,9; 1. ဓာတ်ဆီ 5,8; ယော 8,44; အလုပ် 1,6စာ-၁၂; ဇာခရိ 3,1စာ-၁၇; ဗျာဒိတ် ၂2,10; 2. ကောရိန္သု 4,4; ဗျာဒိတ် ၂၀:၁-၃; ဟီး 2,14; 1. ဂျိုဟန် 3,8)
စာတန် - ဘုရားသခင်ရှုံးနိမ့်တဲ့ရန်သူ
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောနတ်ဆိုးသည်စာတန်နှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့အနောက်ပိုင်းကမ္ဘာ၌ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာဖြစ်ပေါ်နေသောအချက်နှစ်ချက်ရှိသည်။ လူအများစုကစာတန်၏ပရမ်းပတာ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်မကောင်းမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခန်းကဏ္ignကိုမသိကျိုးကျွံပြုထားကြသည်။ လူများစွာအတွက်မူစစ်မှန်သောမာရ်နတ်၏အတွေးအခေါ်သည်ရှေးခေတ်အယူသီးမှုအကြွင်းအကျန်သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးမှာကမ္ဘာပေါ်ရှိမကောင်းမှုများကိုပုံဖော်သည့်ရုပ်ပုံဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူခရစ်ယာန်များသည်“ ဝိညာဉ်ရေးစစ်ပွဲ” ၏ပုံသဏ္ဌာန်အရလူသိများသောမာရ်နတ်အပေါ်အယူသီးသောအမြင်များကိုလက်ခံကျင့်သုံးခဲ့သည်။ သူတို့သည်မာရ်နတ်ကိုအလွန်အမင်းဂုဏ်တင်ပြီးကျမ်းစာစောင်များတွင်တွေ့ရသောအကြံဥာဏ်များနှင့်မသင့်လျော်သောနည်းလမ်းများဖြင့်“ သူ့ကိုစစ်တိုက်ခြင်း” ဖြစ်သည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာစာတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မာကျမ်းစာကဘာကိုဖော်ပြသလဲဆိုတာကိုတွေ့နိုင်တယ်။ ဤနားလည်သဘောပေါက်မှုဖြင့်လက်နက်ကိုင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောအစွန်းရောက်မှု၏ထောင်ချောက်များကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ဟေရှာယ ၄4,3ယူ-၂၃ နှင့် ယေဇကျေလ ၂8,1-9 သည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် အပြစ်ပြုသော ကောင်းကင်တမန်အဖြစ် မာရ်နတ်၏ မူလအစကို ဖော်ပြခြင်းဟု ယူဆကြသည်။ အချို့သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မာရ်နတ်၏သဲလွန်စအဖြစ် ယူဆောင်နိုင်သည်။ သို့သော် ကျမ်းပိုဒ်အများစုသည် လူသားဘုရင်များဖြစ်သည့် ဗာဗုလုန်နှင့် တုရုဘုရင်တို့၏ အနတ္တနှင့် မာနကို ရည်ညွှန်းကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်များ၏ နောက်ခံအကြောင်းအရာက ဖော်ပြသည်။ ကျမ်းပိုဒ်နှစ်ပိုဒ်စလုံးတွင် အဓိကအချက်မှာ ဘုရင်များသည် မာရ်နတ်၏ ခြယ်လှယ်ခြင်းကို ခံရပြီး ဘုရားသခင်ကို မုန်းတီးသော ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် သူ၏ မကောင်းသော ရည်ရွယ်ချက်များကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင် စာတန်အကြောင်းပြောရန်မှာ သူ၏လူသားအေးဂျင့်များဖြစ်သော ဘုရင်များ ၏ထွက်သက်ကို တူညီစွာပြောရန်ဖြစ်သည်။ မာရ်နတ်သည် လောကကို အုပ်စိုးသောနည်းဟု ဆို၏။
ယောဘကျမ်းတွင်၊ ကောင်းကင်တမန်များကို ရည်ညွှန်းကာ ၎င်းတို့သည် ဤလောကကို ဖန်ဆင်းခြင်းတွင် ရှိနေကြပြီး အံ့ဩပျော်ရွှင်မှုများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည် (ယောဘ ၃ ကော၊8,7) အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ယောဘ ၁-၂ ၏စာတန်သည် “ဘုရားသခင်၏သားတော်များ” များထဲတွင်ပါဝင်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်၊ ကောင်းကင်တမန်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပုံရသည်။ သို့ရာတွင် သူသည် ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ရန်ဘက်ပြုသူဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာတွင် "ကျဆုံးသောကောင်းကင်တမန်များ" ကိုရည်ညွှန်းချက်အချို့ရှိသည်။2. ဓာတ်ဆီ 2,4; ယုဒ ၆; အလုပ် 4,18) သို့သော် စာတန်သည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူဖြစ်လာပုံနှင့် ပတ်သက်သည့် ကြီးကြီးမားမားမရှိပေ။ သမ္မာကျမ်းစာတွင် ကောင်းကင်တမန်များ၏ အသက်တာအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသလို “ကောင်းသော” ကောင်းကင်တမန်များ၊ ကြွေကျနေသော ကောင်းကင်တမန်များ (နတ်ဆိုးများဟုလည်း ခေါ်သည်)။ သမ္မာကျမ်းစာ၊ အထူးသဖြင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းသည် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ပျက်ပြားစေရန် စာတန်အား ကျွန်ုပ်တို့အား ပြသရန် ပို၍စိတ်ဝင်စားပါသည်။ ယေရှုခရစ်၏အသင်းတော်သည် ဘုရားသခင်၏လူမျိုးတော်၏ အကြီးမားဆုံးရန်သူအဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် စာတန် သို့မဟုတ် မာရ်နတ်ကို ထင်ရှားသောနည်းဖြင့် အမည်မဖော်ပြပါ။ သို့သော်၊ နတ်မင်းကြီးများသည် ဘုရားသခင်နှင့် စစ်တိုက်နေသည်ဟူသော ယုံကြည်ချက်ကို ၎င်းတို့၏ စာမျက်နှာများ၏ စေ့ဆော်မှုတွင် ထင်ရှားသည်။ စာတန် သို့မဟုတ် မာရ်နတ်ကို သရုပ်ဖော်ထားသည့် ဓမ္မဟောင်း ပန်းချီကား နှစ်ခုမှာ နတ်မင်းကြီးများနှင့် နတ်ဆိုးများ ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာမြေကြီးကို သိမ်းပိုက်ပြီး ဘုရားသခင်ကို တိုက်ခိုက်နေသည့် စာတန်မာရ်နတ်၏ သရုပ်ဖော်ပုံများဖြစ်သည်။ ယောဘ ၂6,12-၁၃ ဘုရားသခင်က “ပင်လယ်ကို နှိုးဆော်” ပြီး “ရာခပ်ကို အပိုင်းပိုင်းခွဲ” ကြောင်း ရှင်းပြသည်ကို ယောဘမြင်ရသည်။ ရာခပ်ကို “မြွေပွေး” (း၁၃) ဟု ဖော်ပြသည်။
စာတန်ကို ပုဂ္ဂလအဖြစ်ဖော်ပြသည့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိ နေရာအနည်းငယ်တွင်၊ စာတန်သည် သဘောထားကွဲလွဲမှုမျိုးစေ့ချရန်နှင့် စွပ်စွဲရန်ရှာနေသူအဖြစ် စာတန်ကို စွပ်စွဲခြင်းခံရသည် (ဇာခရိ၊ 3,1(၂) ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားရန် လူတို့ကို လှုံ့ဆော်သည် (၁ရာဇဝင်ချုပ် ၂1,1) ကြီးစွာသောဝေဒနာနှင့်ဒုက္ခဖြစ်စေရန် လူများနှင့်ဒြပ်စင်များကိုအသုံးပြုသည် (ယောဘ 1,6နှစ်ဆယ် 2,1-8) ။
ယောဘကျမ်းတွင် စာတန်သည် ကောင်းကင်ကောင်စီသို့ခေါ်ခံရသကဲ့သို့ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မိမိကိုယ်မိမိတင်ပြရန် အခြားကောင်းကင်တမန်များနှင့်အတူ လာနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ လူတို့၏အရေးကိစ္စများကို သြဇာလွှမ်းမိုးနေသော ကောင်းကင်ဘုံရှိ ကောင်းကင်တမန်များစုဝေးခြင်းအကြောင်း အခြားသော သမ္မာကျမ်းစာကိုးကားချက်များလည်း ရှိသေးသည်။ ထိုအရာများထဲမှ တစ်ခုတွင် မုသားနတ်သည် ဘုရင်တစ်ပါးကို စစ်တိုက်ရန် သွေးဆောင်သည် (1. ဘုရင်များ ၁2,19-22) ။
“လေဝိသန်၏ဦးခေါင်းကို ရိုက်၍ သားရဲတို့ ကိုက်စားခြင်းငှာ ဘုရားသခင်အား ပေးတော်မူ၏” (ဆာလံ ၇)၊4,14) လေဝိသန်က ဘယ်သူလဲ။ ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာမြေကြီးမှ မကောင်းမှုအားလုံးကို ဖယ်ရှားပြီး သူ၏နိုင်ငံကို တည်ထောင်မည့်အချိန်၌ သခင်ဘုရား ဒဏ်ခတ်တော်မူမည့် “ပင်လယ်ဘီလူး”—“ပြေးသောမြွေ” နှင့် “အကွေ့အကောက်ရှိသောမြွေ” ဖြစ်သည် (ဟေရှာယ ၂ ကော၊7,1).
မြွေတစ်ကောင်လို လေဝိသန်၏ပုံစံသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်သို့ ပြန်သွားသည်။ ဤတွင် မြွေသည် “လယ်ပြင်၌ရှိသော သားရဲထက်သာ၍ လိမ္မာသည်” ဟူသည်မှာ လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားရန် သွေးဆောင်သဖြင့် သူတို့ကျဆုံးခြင်း (1. ကြွက် 3,1စာ-၇)။ ယင်းက သူနှင့်မြွေအကြား အနာဂတ်စစ်ပွဲတစ်ခု၏ နောက်ထပ်ပရောဖက်ပြုချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ ယင်းတွင် မြွေသည် ပြတ်ပြတ်သားသားတိုက်ပွဲ (ဘုရားသခင့်ခြေဖနောင့်ကို ဓားဖြင့်ထိုးခြင်း) မှသာလျှင် တိုက်ပွဲရှုံး (သူ၏ဦးခေါင်းကို ကြေမွခြင်း) ဖြစ်ပုံပေါ်သည်။ ဤပရောဖက်ပြုချက်တွင် ဘုရားသခင်က မြွေအား “သင်နှင့်မိန်းမ၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် သူ၏အမျိုးအနွယ်ကို ငါရန်ငြိုးဖွဲ့မည်။ မင်း​ရဲ့​ဦး​ခေါင်း​ကို ကြိတ်​ပြီး မင်း​ခြေ​ဖနောင့်​ကို ဓား​နဲ့ ထိုး​လိမ့်​မယ်။"1. ကြွက် 3,15).
နာဇရက်မြို့သားယေရှုအဖြစ် ဘုရားသခင်၏ လူ့ဇာတိခံယူခြင်း၏အလင်းတွင် ဤဖော်ပြချက်၏ နတ်မင်းကြီး၏အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်နိုင်သည် (ယောဟန်၊ 1,1. ၁၄)။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် စာတန်သည် ယေရှုကို မွေးဖွားသည့်နေ့မှစ၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သေဆုံးချိန်အထိ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ စာတန်သည် သူ၏လူသားကိုယ်စားလှယ်များအားဖြင့် ယေရှုကို သတ်ခြင်းတွင် အောင်မြင်သော်လည်း၊ သူ၏အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် မာရ်နတ်သည် စစ်ရှုံးသည်။
သခင်ယေရှု နန်းတက်ပြီးနောက်၊ ခရစ်တော်၏သတို့သမီး-ဘုရားသခင့်လူများ-နှင့် မာရ်နတ်နှင့် သူ၏အစေခံများကြား နတ်မင်းကြီးတိုက်ပွဲသည် ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်သည် အောင်မြင်ပြီး ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ယေရှုသည် ပြန်လာ၍ ကိုယ်တော်နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော ဝိညာဏဆန့်ကျင်ဘက်များကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မည် (1. ကောရိန္သု ၁5,24-28) ။
ထို့ထက်ကားဗျာဒိတ်ကျမ်းသည်စာတန်မောင်းနှင်နေသောကမ္ဘာပေါ်ရှိမကောင်းမှုအင်အားစုများနှင့်ဘုရားသခင့်အပေါကလီယပ်စ် ဦး ဆောင်သောချာ့ချ်ရှိကောင်းသောအင်အားစုများအကြားရှိဤတိုက်ပွဲကိုဖော်ပြထားသည်။ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောဂျေရုဆလင်မြို့သစ်သည်စစ်တိုက်နေသောမြေကြီးအုပ်စုနှစ်ခုကိုကိုယ်စားပြုသည်။
စစ်ပွဲပြီးသွားသောအခါ၊ မာရ်နတ် သို့မဟုတ် စာတန်သည် တွင်းနက်ကြီးထဲတွင် သံကြိုးဖြင့်ချည်နှောင်ခံရပြီး ယခင်ကကဲ့သို့ “ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို လှည့်ဖြား” ခြင်းမှ တားဆီးခံရလိမ့်မည် (ရောမ ၁။2,9).
အဆုံးတွင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် မကောင်းမှုမှန်သမျှကို အောင်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် သိုးသငယ်သည် သူတို့၏လူများနှင့်အတူ ထာဝရငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ရွှင်လန်းမှုဖြင့် တည်ရှိရာ စံပြမြို့—သန့်ရှင်းသောမြို့တော်၊ ဘုရားသခင်၏ ယေရုရှလင်မြို့ကို ပုံဖော်ထားခြင်းဖြစ်သည် (ဗျာဒိတ် ၂ ကော၊1,15စာ-၂၇)။ စာတန်နှင့် ဒုစရိုက်၏ စွမ်းအားရှိသမျှ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရလိမ့်မည် (ဗျာဒိတ် ၂၀း၁၀)။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်စာတန်ကိုဘုရားသခင်နှင့်လူသားတို့၏ရန်သူအဖြစ်ထင်ရှားစွာဖော်ပြထားသည်။ ငါတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့်မကောင်းမှုများအတွက်မာရ်နတ်သည်တစ်နည်းနည်းဖြင့်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ယေရှုသည်မိမိ၏ကုသခြင်းဓမ္မအမှုတွင်ကျရောက်နေသောကောင်းကင်တမန်များနှင့်စာတန်ကိုဖျားနာခြင်းနှင့်ဖျားနာခြင်းများအကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရုပြုသင့်ပြီးပြproblemနာတိုင်းသို့မဟုတ်ဖျားနာမှုအားလုံးကိုစာတန်၏တိုက်ရိုက်ထိုးနှက်ချက်ဟုမသတ်မှတ်သင့်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဓမ္မသစ်ကျမ်းသည်ရောဂါအပါအ ၀ င်ဘေးအန္တရာယ်များစွာအတွက်မာရ်နတ်နှင့်သူ၏မကောင်းသောအပေါင်းအသင်းများအားအပြစ်တင်ရန်မတွန့်ဆုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ဖျားနာမှုသည်မကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် စာတန်နှင့် ကျဆုံးသောဝိညာဉ်များကို “ထာဝရမီး” ပြင်ဆင်ပေးသော “မာရ်နတ်နှင့် သူ၏ကောင်းကင်တမန်များ” အဖြစ် ရည်ညွှန်းခဲ့သည် (မဿဲ ၂၊5,41) ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် နတ်ဆိုးများသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါအမျိုးမျိုးနှင့် ဖျားနာခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရပါသည်။ အချို့သောကိစ္စများတွင် နတ်ဆိုးများသည် လူတို့၏စိတ်နှင့်/သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တက်ခြင်း၊ အသံတိတ်ခြင်း၊ မျက်စိကွယ်ခြင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း လေဖြတ်ခြင်းနှင့် ရူးသွပ်ခြင်းပုံစံအမျိုးမျိုးတို့ကို ဖြစ်စေသည်။
လုကာသည် “တဆယ့်ရှစ်နှစ်ပတ်လုံး နာစေသောနတ်စွဲ” တရားဇရပ်တွင် ယေရှုတွေ့ဆုံခဲ့သည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြောင်း လုကာပြောသည် (လုကာ ၁ ကော၊3,11) ယေရှုသည် သူမအား ရောဂါဝေဒနာမှ ကယ်နုတ်ခဲ့ပြီး ဥပုသ်နေ့တွင် ကုသခြင်းအတွက် ဝေဖန်ခံခဲ့ရသည်။ ယေရှုကလည်း၊ ဤမိန်းမသည် စာတန်တဆယ်ရှစ်နှစ်ပတ်လုံး ချည်နှောင်ထားသော အာဗြဟံ၏သမီးဖြစ်သော ဤဥပုသ်နေ့၌ ကျွန်ခံခြင်းမှ လွတ်စေခြင်းငှာ မသင့်သလော။ (း၁၆)။
အခြားကိစ္စများတွင်မူ၊ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းက လနှင့်ရိုက်ခံရသော ယောက်ျားလေးတစ်ဦးတွင်ကဲ့သို့ ရောဂါဝေဒနာ၏အကြောင်းရင်းအဖြစ် နတ်ဆိုးများကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည် (မဿဲ ၁။7,14စာ-၂၀; မားကပ် 9,14-29; လု 9,37စာ-၄၅)။ ယေရှုသည် ဤနတ်ဆိုးများကို မသန်စွမ်းသူများကို ထားခဲ့ရန် ရိုးရှင်းစွာ အမိန့်ပေးနိုင်ပြီး သူတို့သည် နာခံခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်၊ ယေရှုသည် စာတန်နှင့် နတ်ဆိုးများ၏ကမ္ဘာကို အုပ်စိုးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ယေရှုသည် နတ်ဆိုးများအပေါ် တူညီသောအခွင့်အာဏာကို သူ၏တပည့်တော်များထံ ပေးခဲ့သည်။ (မဿဲ၊ 10,1).
တမန်တော်ပေတရုသည် ယေရှု၏ကုသခြင်းလုပ်ငန်းကို တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ စာတန်နှင့် သူ၏နတ်ဆိုးများဖြစ်စေသော ရောဂါများနှင့် ဖျားနာမှုများမှ လူများကို ကယ်နုတ်ပေးသူတစ်ဦးအဖြစ် ပြောဆိုခဲ့သည်။ “ယုဒပြည်တစ်ခွင်လုံးတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ကို သင်သိသည်... ဘုရားသခင်သည် နာဇရက်မြို့သားယေရှုအား သန့်ရှင်းသောစွမ်းအားတော်နှင့် တန်ခိုးဖြင့် ဘိသိက်ပေးပုံ၊ ဘုရားသခင်သည် သူနှင့်အတူရှိတော်မူသောကြောင့်၊ မာရ်နတ်၏တန်ခိုး၌ရှိသောသူအပေါင်းတို့ကို ကျေးဇူးပြုခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ 10,37စာ-၃၈)။ ယေရှု၏ကုသခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ဤရှုမြင်ပုံသည် စာတန်သည် ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏ဖန်ဆင်းခြင်း အထူးသဖြင့် လူသားတို့အပေါ် ရန်ဘက်ဖြစ်သည်ဟူသော ယုံကြည်ချက်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။
၎င်းသည်ဆင်းရဲဒုက္ခနှင့်အပြစ်အတွက်မာရ်နတ်အပေါ်အပြစ်ပုံ ချ၍ သူ့ကိုထိုအရာအဖြစ်ဖော်ပြသည်
"ပထမအပြစ်သား" မာရ်နတ်သည် အစကတည်းက ဒုစရိုက်ကို ပြုသည်” (1. ဂျိုဟန် 3,8) သခင်ယေရှုက စာတန်ကို “နတ်ဆိုးမင်း” ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်—ကျဆုံးသောကောင်းကင်တမန်များကိုအုပ်စိုးသူ (မဿဲ ၂၊5,41) ရွေးနုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားဖြင့် ယေရှုသည် လောကအပေါ် မာရ်နတ်၏ချုပ်ကိုင်မှုကို ချိုးဖျက်ခဲ့သည်။ စာတန်သည် သခင်ယေရှု၏အိမ်ထဲသို့ “အားကြီးသောသူ” ဖြစ်သည် (မာ 3,27) ယေရှုသည် ခွန်အားကြီးသောသူကို “ချည်နှောင်” ပြီး “လက်ရဥစ္စာများကို ဝေငှ” [သူ၏ဥစ္စာ၊ နိုင်ငံတော်ကို သိမ်းသွား]။
ထို့ကြောင့် ယေရှုသည် လူ့ဇာတိအားဖြင့် ကြွလာခဲ့သည်။ ယောဟန်ဤသို့ရေးခဲ့သည်– “ဤအကြံအစည်ကြောင့် မာရ်နတ်၏အကျင့်ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ပေါ်ထွန်းတော်မူ၏” (1. ဂျိုဟန် 3,8) ကောလောသဲသည် ဤပျက်စီးနေသောအလုပ်အကြောင်းကို စကြာဝဠာဝေါဟာရများဖြင့် ပြောသည်- "၎င်းတို့၏အထွဋ်အမြတ်များနှင့် အာဏာစက်များကို ဖယ်ရှားကာ ထင်ရှားစွာသတ်မှတ်၍ ခရစ်တော်၌ အောင်ပွဲခံစေတော်မူသည်" (ကောလောသဲ၊ 2,15).
ဟေဗြဲလူများထံပေးစာတွင် ယေရှုဤသို့လုပ်ဆောင်ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်– “သားသမီးတို့သည် အသွေးအသားရှိသောကြောင့် ထိုစာကိုလက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ မိမိအသေခံခြင်းအားဖြင့် မာရ်နတ်တည်းဟူသော သေမင်းကိုအုပ်စိုးသောသူကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ သေခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့သော သူတို့သည် တစ်သက်လုံး ကျွန်ခံစေခြင်းငှာ ရွေးနှုတ်ခြင်းသို့ ရောက်ကြ၏။” (ဟေဗြဲ၊ 2,14-15) ။
ထို့ကြောင့် စာတန်သည် သားတော်ယေရှုခရစ်၌ ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်မှာ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ စာတန်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ နှုတ်ကပတ်တော် ဇာတိဖြစ်သော ယေရှုကို သတ်ရန်ဖြစ်သည် (ဗျာဒိတ် ၁ ကော2,3; မက်သယူး 2,1-၁၈) မိမိအသက်တာအတွင်း သူ့ကိုသွေးဆောင်ခြင်း (လု 4,1(း၁၃)၊ ထောင်ချ၍ သတ်ခြင်း (း၁၃)၊ လုကာ ၂2,3-6) ။
စာတန်သည်ယေရှု၏အသက်တာကိုနောက်ဆုံးကြိုးပမ်းရာ၌အောင်မြင်ခဲ့သည်။ သို့သော်သခင်ယေရှု၏သေခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည်မာရ်နတ်ကိုဖော်ထုတ်။ ပြစ်တင်ရှုတ်ချသည်။ ယေရှုသည်မာရ်နတ်နှင့်သူ၏နောက်လိုက်များတင်ပြသောကမ္ဘာလောက၏လမ်းစဉ်များနှင့်မကောင်းမှုများကိုလူအများမြင်သာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင့်မေတ္တာတော်လမ်းစဉ်သာမှန်ကန်ကြောင်းကြားနာရန်ဆန္ဒရှိသူအားလုံးရှင်းသွားသည်။
ယေရှု၏ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သူ၏ရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားဖြင့်၊ မာရ်နတ်၏အကြံအစည်များသည် ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပြီး သူရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သူ၏အသက်၊ အသေခံခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်၊ ခရစ်တော်သည် စာတန်ကို အနိုင်ယူပြီး မကောင်းမှု၏အရှက်ကို ဖော်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။ သစ္စာဖောက်တဲ့ညမှာ ယေရှုက တပည့်တော်တွေကို “ခမည်းတော်ထံတော်သို့ သွားရမည်ဟု မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ဤလောကကို အစိုးရသောမင်းသည် ယခုစီရင်ခြင်းခံရပြီ” (ယော ၁း၁)။6,11).
ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာပြီးနောက်၊ ဤလောက၌ မာရ်နတ်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု ရပ်တန့်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သူ၏ အဆုံးစွန်သောရှုံးနိမ့်မှုကို ထင်ရှားစေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအောင်ပွဲသည် ဤခေတ်အဆုံးတွင် နောက်ဆုံးနှင့် တည်တံ့သောပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ဖြစ်လာလိမ့်မည် (မဿဲ ၁ ကော၊3,37-42) ။
သူ၏သေစေသောဓမ္မအမှုတွင် ယေရှုက "ဤလောက၏မင်းကို နှင်ထုတ်လိမ့်မည်" ဟုကြေငြာခဲ့သည် (ယော ၁း၁၊2,31ဤမင်းသားသည် သူ့အပေါ် “အာဏာမရှိ” ဟုဆိုသည် (ယော၊ ၁4,30) မာရ်နတ်သည် သူ့အား သူ၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် မဆောင်နိုင်ခဲ့သောကြောင့် စာတန်ကို ယေရှု အနိုင်ယူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုကို သူ၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ယုံကြည်ခြင်းမှ ဝေးကွာအောင် သွေးဆောင်ရန် လုံလောက်သော သွေးဆောင်မှု မရှိသော စာတန်သည် (မဿဲ၊ 4,1စာ-၁၁)။ သူသည် မာရ်နတ်ကို အနိုင်ယူပြီး “အားကြီးသော သူ” ၏ ဥစ္စာများကို ခိုးယူ၍ ချုပ်ထားခဲ့သော ကမ္ဘာ (မဿဲ ၁၊2,24စာ-၂၉)။ ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မာရ်နတ်အပါအဝင် ဘုရားသခင်၏ရန်သူ (နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်သူ) အားလုံးကို ယေရှု၏အောင်ပွဲ၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အနားယူနိုင်ပါသည်။
သို့သော်လည်း ဘုရားသခင်သည် စာတန်အား ကမ္ဘာကြီးအား လှည့်ဖြားရန်နှင့် ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် သေခြင်းတို့ကို ဖြန့်ကြက်ရန် ဆက်လက်ခွင့်ပြုထားသည့် “ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း မသေးသေး” ဟူသော တင်းမာမှုတွင် အသင်းတော်တည်ရှိနေပါသည်။ ခရစ်ယာန်များသည် ယေရှု၏သေခြင်း၏ “ပြီးပြီ” အကြားတွင် နေထိုင်ကြသည် (ယော ၁9,30) နှင့် “ဆိုးညစ်ခြင်း၏ အဆုံးစွန်သော ပျက်စီးခြင်း” နှင့် မြေကြီးပေါ်၌ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်၏ အနာဂတ် ကြွလာခြင်း (ဗျာဒိတ် ၂ ကော၊1,6) စာတန်သည် ဧဝံဂေလိတရား၏ တန်ခိုးကို ဆန့်ကျင်ရန် ထက်သန်ခွင့်ပြုဆဲဖြစ်သည်။ မာရ်နတ်သည် မမြင်နိုင်သော အမှောင်၏မင်းသားအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ရည်ရွယ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် တန်ခိုးရှိသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းက စာတန်သည် လက်ရှိလောကတွင် ဆိုးသွမ်းသောထိန်းချုပ်မှုစွမ်းအားဖြစ်ပြီး လူများသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် မသိစိတ်က သူ့နောက်သို့ လိုက်သွားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြသည်။ (ဂရိဘာသာစကားတွင် "မင်းသား" သို့မဟုတ် "မင်းသား" [ယောဟန် ၁ ၌ပါရှိသည်။2,31 နိုင်ငံရေးခရိုင် သို့မဟုတ် မြို့တော်၏ အမြင့်ဆုံး အစိုးရအရာရှိကို ရည်ညွှန်းသော ဂရိစကားလုံး archon ၏ ဘာသာပြန်ဆိုချက်)။
တမန်တော်ပေါလုက စာတန်သည် “မယုံကြည်သူများ၏စိတ်ကို ကန်းစေ” သော “ဤလောက၏ဘုရား” ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြသည်။2. ကောရိန္သု 4,4) စာတန်သည် အသင်းတော်၏အလုပ်ကိုပင် ဟန့်တားနိုင်ကြောင်း ပေါလုနားလည်ခဲ့သည်။2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 2,17-19) ။
ယနေ့၊ အနောက်ကမ္ဘာမှ အများစုသည် ၎င်းတို့၏ဘဝနှင့် အနာဂတ်ကို အခြေခံ၍ အကျိုးသက်ရောက်သည့် လက်တွေ့ဘဝတွင်—မာရ်နတ်သည် အလှည့်တိုင်းတွင် သူတို့ကို အန္တရာယ်ပြုရန် ကြိုးပမ်းကာ ဘုရားသခင့်မေတ္တာပါရည်ရွယ်ချက်ကို တားဆီးရန် ကြိုးစားသည့် မာရ်နတ်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကို အနည်းငယ်မျှ အာရုံစိုက်နေကြသည်။ ကျိန်းဝပ်နေသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့် တန်ခိုးတော်အားဖြင့် သူတို့ကို တွန်းလှန်နိုင်စေရန် စာတန်၏ ပရိယာယ်များကို သတိပြုမိရန် ခရစ်ယာန်များအား တိုက်တွန်းထားသည်။ (ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ခရစ်ယာန်အချို့သည် စာတန်အတွက် “အမဲလိုက်ခြင်း” တွင် လွဲမှားသောအစွန်းသို့ရောက်သွားပြီး မာရ်နတ်သည် အမှန်တကယ်နှင့် မကောင်းသောသတ္တဝါဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆကို မထီမဲ့မြင်ပြုသူများကို မရည်ရွယ်ဘဲ ထပ်လောင်းအစာပေးခဲ့သည်။)
စာတန်၏ကိရိယာများကို သတိထားရန် အသင်းတော်အား သတိပေးထားသည်။ ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များ ပေါလုဆိုသည်ကား၊ သူတို့သည် “မာရ်နတ်၏ကျော့ကွင်းထဲသို့ ဖမ်းမိခြင်းငှာ ဘုရားသခင်၏ခေါ်တော်မူခြင်းခံထိုက်သောအသက်တာ၌ အသက်ရှင်ရမည်” ဟုဆိုသည်။1. တိမောသေ 3,7) ခရစ်ယာန်များသည် စာတန်၏ပရိယာယ်များကို သတိပြုရမည်ဖြစ်ပြီး “ကောင်းကင်အောက်ရှိ နတ်ဆိုးများကို ဆန့်ကျင်ဘက်” ဘုရားသခင်၏လက်နက်စုံကို ဝတ်ဆင်ရမည် (ဧဖက်၊ 6,10-12) တင်းကျပ်ခြင်း။ သူတို့သည် “စာတန်၏လှည့်စားခြင်းကို ခံရမည်” ဟူသည့်အချက်ကို လုပ်ဆောင်ရပေမည်။2. ကောရိန္သု 2,11).
မာရ်နတ်သည် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်၏ အမှန်တရားအတွက် ဝိညာဉ်ရေးမျက်စိကွယ်ခြင်းကို ဖန်တီးသည်။ မှားယွင်းသောအယူဝါဒများနှင့် "နတ်ဆိုးများသွန်သင်သော" အမျိုးမျိုးသောအယူအဆများသည် လူတို့ကို လှည့်စားခြင်း၏အဆုံးစွန်သောရင်းမြစ်ကို မသိကြသော်လည်း လူတို့အား "လှည့်ဖြားသောနတ်များနောက်သို့" ဖြစ်စေသည် (1. တိမောသေ 4,1စာ-၅)။ မျက်စိကွယ်သည်နှင့် တပြိုင်နက် လူတို့သည် ဧဝံဂေလိတရား၏အလင်းကို နားမလည်နိုင်ကြဘဲ၊ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်နှင့်သေခြင်းမှ ရွေးနှုတ်တော်မူသည့် သတင်းကောင်းဖြစ်သည် (1. ဂျိုဟန် 4,1နှစ်ဆယ် 2. ယော ၇)။ စာတန်သည် ဧဝံဂေလိတရား၏ အဓိကရန်သူဖြစ်ပြီး သတင်းကောင်းကိုငြင်းပယ်ရန် လူတို့ကိုလှည့်ဖြားရန်ကြိုးစားသည့် “ဆိုးညစ်သူ” (မဿဲ ၁။3,18-23) ။
စာတန်သည် သင့်အား ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ လှည့်ဖြားရန် ကြိုးစားရန် မလိုအပ်ပါ။ မှားယွင်းသော ဒဿနိကဗေဒနှင့် သီအိုရီဆိုင်ရာ အယူအဆများကို ဖြန့်ဝေသူများမှတဆင့် သူလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတွင် မြှုပ်နှံထားသော ဆိုးယုတ်မှုနှင့် လှည့်ဖြားမှုပုံစံများဖြင့် လူသားများကို ကျွန်ခံနိုင်သည်။ မာရ်နတ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်၌ ကျဆုံးနေသော လူ့သဘောသဘာဝကို အသုံးချနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့် လူများက ၎င်းတို့တွင် “အမှန်တရား” ရှိသည်ဟု ယုံကြည်စေရန်အတွက်ကြောင့်၊ ဘုရားသခင်သည် ဤလောကနှင့် မာရ်နတ်၏အရာကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောလူများက ၎င်းတို့၏ လွဲမှားသောယုံကြည်မှုစနစ်က သူတို့ကို ကယ်တင်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည် (2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 2,9(၁၀) သို့ရာတွင်၊ သူတို့အမှန်တကယ်ပြုခဲ့သည့်အရာမှာ ၎င်းတို့သည် “ဘုရားသခင်၏အမှန်တရားကို မုသာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်” (ရောမ၊ 1,25) စာတန်သည် သူ၏သွန်သင်ချက်သည် “အလင်း၏ကောင်းကင်တမန်” မှအမှန်တရားတစ်ခုကဲ့သို့ ဖြစ်သောကြောင့် “မုသာ” သည် ကောင်းမွန်ပြီး မှန်ကန်ပုံရသည်။2. ကောရိန္သု 11,14) အလုပ်များ။
ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၊ စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျဆုံးသွားသော သဘာဝ၏သွေးဆောင်မှုနှင့် အပြစ်ပြုလိုသောဆန္ဒနောက်ကွယ်တွင်ရှိပြီး၊ ထို့ကြောင့် သူသည် "သွေးဆောင်သူ" ဖြစ်လာသည် (2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 3,5; 1. ကောရိန္သု 6,5; တမန်တော်များ၏ လုပ်ရပ်များ 5,3) ခေါ်တယ်။ ပေါလုသည် ကောရိန္သုမြို့ရှိ အသင်းတော်ဆီသို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။ 1. ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၃ နှင့် မာရ်နတ်သည် ခရစ်တော်ထံတော်မှ မလွှဲမရှောင်ရန် သူတို့ကို သတိပေးရန် ဧဒင်ဥယျာဉ်၏ ဇာတ်လမ်း။ “မြွေသည် ဧဝကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ လှည့်စားသကဲ့သို့၊ သင်တို့၏ အကြံအစည်များသည် ခရစ်တော်၏ ရိုးရှင်းမှုနှင့် သစ္စာတရားတို့မှ လွဲသွားမည်ကို ငါကြောက်သည်” (2. ကောရိန္သု 11,3).
စာတန်သည် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွေးဆောင်ပြီး လူတိုင်းကို တိုက်ရိုက်လှည့်ဖြားခဲ့ကြောင်း ပေါလု ယုံကြည်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ “မာရ်နတ်က ငါ့ကို ခိုင်းစေတယ်” လို့ ထင်နေတဲ့လူတွေက အပြစ်လုပ်တိုင်း စာတန်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးစနစ်နဲ့ ငါတို့အပေါ် ကျသွားတဲ့ သဘာဝကို အသုံးပြုနေတာကို မသိကြဘူး။ အထက်ဖော်ပြပါ သက်သာလောနိတ်ခရစ်ယာန်များကိစ္စတွင်၊ ပေါလုအား အမုန်းပွားစေသော ဆရာသမားများက ဤလှည့်ဖြားမှုကို ပြီးမြောက်စေကာ၊ သူ [ပေါလု] သည် ၎င်းတို့အား လှည့်ဖြားနေသည်ဟု လူတို့အား လှည့်ဖြားခြင်း သို့မဟုတ် လောဘ သို့မဟုတ် အခြားမသန့်ရှင်းသော ရည်ရွယ်ချက်အချို့ကို ဖုံးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည် (2. သက်သာလောနိတ်မြို့ 2,3စာ-၁၂)။ သို့သော် မာရ်နတ်သည် သဘောထားကွဲလွဲမှုကို မျိုးစေ့ချပြီး ကမ္ဘာကြီးကို ခြယ်လှယ်နေသောကြောင့် နောက်ဆုံးတွင် သဘောထားကွဲလွဲမှုနှင့် မုန်းတီးမှုမျိုးစေ့ချသူအားလုံး၏နောက်ကွယ်တွင် သူသည် သူ့ကိုယ်သူ သွေးဆောင်သည်။
ဧကန်စင်စစ်၊ ပေါလု၏အဆိုအရ၊ အပြစ်ကြောင့် အသင်းတော်၏မိတ်သဟာယနှင့် ကင်းကွာသွားသောခရစ်ယာန်များသည် “စာတန်လက်သို့ အပ်နှံ” ကြသည်။1. ကောရိန္သု 5,5; 1. တိမောသေ 1,20) သို့မဟုတ် “လမ်းလွဲ၍ စာတန်နောက်သို့ လိုက်လော့” (1. တိမောသေ 5,15) ပေတရုက သူ၏သိုးစုကို ဤသို့တိုက်တွန်းသည်– “သတိရှိကြလော့။ အကြောင်းမူကား၊ သင်တို့၏ရန်ဘက်ဖြစ်သော မာရ်နတ်သည် အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်းဟု ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ လှည့်ပတ်လျက်နေ၏။"1. ဓာတ်ဆီ 5,8) ပေတရုက စာတန်ကို အနိုင်ယူရန်နည်းလမ်းမှာ “သူ့ကိုဆီးတား” ခြင်းဖြစ်သည် (း၉)။
လူတို့သည် စာတန်ကို မည်သို့ ခုခံကြသနည်း။ ယာကုပ်ဤသို့ရှင်းပြသည်– “ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်ထံ ကိုယ်ကိုကိုယ်တင်ပြကြလော့။ မာရ်နတ်ကိုဆီးတားလျှင် သူသည် သင့်ထံမှ ပြေးလိမ့်မည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်ထံ ချဉ်းကပ်သောအခါ၊ သူသည် သင့်ထံသို့ ချဉ်းကပ်သည်။ လူဆိုးတို့၊ သင်၏လက်ကို စင်ကြယ်စေ၍၊ သင်၏နှလုံးကို သန့်ရှင်းစေလော့၊ လူယုတ်မာတို့၊ 4,7-၈)။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ယုံကြည်ခြင်း၏ကျိန်းဝပ်သောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ကျွေးမွေးပြုစုထားသော ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည် ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် ကျေးဇူးသိတတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ရိုသေလေးမြတ်သောသဘောထားရှိသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ နီးကပ်လာပါသည်။
ခရစ်တော်ကို မသိသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဦးဆောင်မှု မခံရသောသူများ (ရောမ၊ 8,5-17) "ဇာတိပကတိအတိုင်းအသက်ရှင်ရန်" (v. 5) ။ သူတို့သည် “ယခုအချိန်တွင် မနာခံခြင်း၏သားတို့၌ လုပ်ဆောင်သော ဝိညာဉ်” ကို လိုက်လျှောက်ကြပြီး လောကနှင့် ညီညွတ်ကြသည် (ဧဖက်၊ 2,2) အခြားနေရာများတွင် မာရ်နတ် သို့မဟုတ် စာတန်ဟု ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော ဤဝိညာဉ်သည် လူတို့ကို "ဇာတိပကတိနှင့် အာရုံများ၏ တပ်မက်ခြင်း" ကို ကျင့်ကြံရန် ခြယ်လှယ်သည် (အခန်းငယ် ၃)။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်၌ရှိသော သမ္မာတရား၏အလင်းကိုမြင်နိုင်ပြီး၊ နတ်ဆိုး၊ ပြိုလဲနေသောကမ္ဘာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးအားနည်းပြီး အပြစ်ရှိသောလူ့သဘာဝ၏လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် မသိလိုက်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် သူ့နောက်သို့လိုက်သွားနိုင်ပါသည်။
“လောကတစ်ခုလုံးသည် ဆိုးညစ်ခြင်း၌ရှိ၏” [မာရ်နတ်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်] ဟုယောဟန်ရေးသားခဲ့သည် (1. ဂျိုဟန် 5,19) သို့သော် ဘုရားသခင် ၏ သားသမီး များ နှင့် ခရစ်တော်၏ နောက်လိုက် များ သည် အမှန် ကို သိ ရန် ဥာဏ် ကို ပေး သည် (း၂၀)။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁2,7-9 အရမ်းတော်တယ်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏စစ်ပွဲဆောင်ပုဒ်တွင်၊ စာအုပ်တွင် မိက္ခေလနှင့် သူ၏ကောင်းကင်တမန်များနှင့် နဂါး (စာတန်) နှင့် သူ၏ကျဆုံးသောကောင်းကင်တမန်များကြားတွင် နတ်မင်းကြီးတိုက်ပွဲကို သရုပ်ဖော်ထားသည်။ မာရ်နတ်နှင့် သူ၏အစေခံများသည် လုပ်ကြံခံရပြီး “သူတို့နေရာကို ကောင်းကင်ဘုံ၌ မတွေ့ရတော့” (း၈)။ ရလဒ်? “ဤလောကကို လှည့်ဖြားသော မာရ်နတ်စာတန်ဟုခေါ်ဝေါ်သော ရှေးမြွေဟောင်း နဂါးကြီးသည် နှင်ထုတ်ခံရပြီး မြေကြီးပေါ်သို့ လှဲချခံရပြီး သူ၏ကောင်းကင်တမန်များကို သူနှင့်အတူ ချလိုက်သည်” (း၉)၊ ) စာတန်သည် မြေကြီးပေါ်ရှိ ဘုရားသခင်၏လူများကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ကို စစ်တိုက်နေခြင်းဖြစ်သည်။
မကောင်းမှု (စာတန်၏ခြယ်လှယ်မှု) နှင့် ကောင်းမှု (ဘုရားသခင်ဦးဆောင်သော) အကြားစစ်မြေပြင်သည် မဟာဗာဗုလုန် (မာရ်နတ်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိသောကမ္ဘာ) နှင့် ယေရုရှလင်မြို့သစ် (ဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်နောက်တော်လိုက်သောသိုးသငယ်၏ဘုရားသခင်၏လူများကြားစစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့သည်။ ) သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကို မည်သည့်အရာကမှ မအနိုင်ယူနိုင်သောကြောင့် ဘုရားသခင်အနိုင်ရရန် ရည်မှန်းထားသောစစ်ပွဲဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် စာတန်အပါအဝင် ဘုရားသခင့်ရန်သူအားလုံး ရှုံးနိမ့်သွားလိမ့်မည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ယေရုရှလင်မြို့သစ်ကို သင်္ကေတပြုသော ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် မြေကြီးပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာတော့မည်ဖြစ်သည်။ မာရ်နတ်သည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်မှ ဖယ်ရှားခံရမည်ဖြစ်ပြီး သူ၏နိုင်ငံသည် သူနှင့်အတူ သုတ်သင်ခံရလိမ့်မည် (ဗျာဒိတ် ၂၀း၁၀)၊ ဘုရားသခင်၏ ထာဝရမေတ္တာတော်ဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။
အရာခပ်သိမ်း၏ “အဆုံး” နှင့်ပတ်သက်သော ဤအားတက်စရာစကားများကို ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်– “ထိုအခါ ပလ္လင်တော်မှ ကြီးစွာသောအသံဟူမူကား၊ လူတို့တွင် ဘုရားသခင်၏တဲတော်ကို ကြည့်ရှုလော့။ သူသည် သူတို့နှင့်အတူနေ၍၊ သူတို့သည် သူ၏လူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ သူသည် သူတို့နှင့်အတူ ဘုရားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏မျက်စိ၌ မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကို သုတ်တော်မူသဖြင့်၊ သေခြင်းတရားသည် နောက်တဖန်မရှိ၊ ညည်းတွားခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်း၊ ပထမလွန်ပြီ။ ပလ္လင်တော်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသောသူကလည်း၊ ငါသည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို အသစ်လုပ်သည်ဟု ဆို၏။ ပြီးတော့ သူက ဒီလိုပြောတယ် ၊ ဒီစကားတွေက မှန်တယ် သေချာတယ် !” (ဗျာဒိတ် ၂1,3-5) ။
ဂျာမန်ဘာသာဖြင့်ဆောင်းပါး• Google ဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း (GTranslate)
© COPYRIGHT 2022 - WELTWEITE KIRCHE GOTTES (SCHWEIZ) - အဆက်အသွယ် - ဥပဒေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ - မူပိုင်ခွင့်မူဝါဒ - ဆက်သွယ်ရန်